အဖွဲ့ဝင်များ သိစေရန် - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
စန္ဒာ မှ September 22, 2011 11:41am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်သည် တစ်စုံတစ်ယောက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် မူလစာမျက်နှာကနေစ၍ နောက်ခံအရောင်ပြောင်းသွားပါသည်။
ဆိုဒ်ပိုင်ရှင် ကောင်းမြတ်မင်းခေါ်တင်အေးနိုင် သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်ပြန်သွားပါသဖြင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ကြိုးစားပြုပြင်နေပါသော်လည်း
ယခုအချိန်အထိ မူလအတိုင်း မရရှိသေးသောကြောင့် စိုးရိမ်လျှက်ရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် ဆိုဒ်ထဲသို့ လာရောက်လေ့လာချိန်တွင်
စိတ်အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက နားလည်ပေးကြပါရန် နှင့် ဆိုဒ်ကိုလည်း အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြုပြင်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဘလော့အမျိုးအစား(အသိပေးခြင်း) Like4members like this
< (နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးကြည့်ရန်) (ရှေ့ကိုကျော်ပြီးကြည့်ရန်>)
☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺ သို့အဖွဲ့ဝင်ပြီးမှ မှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
khingkhing သည် March 26, 2012 က 6:21pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အမကဒီနောက်ခံလေးက ပြင်ထားတယ်လိုထင်နေတာ
ဖတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ guniea7 သည် March 25, 2012 က 11:19pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ Buddhism is the best religion in the world. Buddhism is the art of painting.
The world will be perfectly beautiful if all the people know how to paint the world through Buddhism. zawwinmwd သည် September 29, 2011 က 9:27pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဖြစ်ပျက်သဘော..
အသေကောင်းအောင်...ကြေးစည်ဘဲထုတော့မယ်.. ကလေးတို.ဆရာမ သည် September 29, 2011 က 2:49pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဘယ်သူ ဘယ်လို ဖျက်ဖျက်
တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ ဆိုတာ
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ငြိမ်းအေးသောကမ္ဘာ ပါ --
သတ္တဝါ အားလုံး ရွှင်ပြုံးချမ်းသာ ပျော်နိုင်ကြပါစေ padout သည် September 23, 2011 က 3:39amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ aww.. lu twe lu twe dote kha naw.. ala karr nay yin pyat ta nar shar shi kya tae.. lu sate shi yin apyat ta marr ma loet kya par nae` lo pyaw chin par tae.. thank.. စန္ဒာ သည် September 22, 2011 က 9:56pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဆိုဒ်အပေါ် ထားရှိတဲ့ အစ်ကိုတို့ရဲ့စေတနာကို လေးစားပါတယ်။၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်း ဖြစ်ရပါတယ်။
ဆိုဒ်ကို မူလအတိုင်းဖြစ်အောင် အမြန်ဆုံးပြန်လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခဏလေးသည်းခံပြီး စောင့်ဆိုင်းပေးစေလိုပါတယ်။
အခုလောလောဆယ် ကိုကောင်းမြတ်မင်း မရှိတာကြောင့် ညီမတို့လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ ထပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
အားလုံး စိတ်အေးချမ်းသာ ရှိကြပါစေရှင်။ win lwin soe သည် September 22, 2011 က 8:49pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အကို ကျော်မင်းဦးပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်
ကျွန်တော်လဲ တတ်နိုင်သလောက် အလှူငွေထည့်ဝင်ပါမယ် နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်) သည် September 22, 2011 က 7:17pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ခုလိုသိရတဲ့အတွက် အားလုံရဲ့ကိုယ်စားဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်ဗျာ။ ခုလဲကျနော်တို့ဝယ်ထားရတာပါ။ ဒါပေ
မဲ့ ကျနော်တို့အက်မင်တွေကိုဝင်ပြင်လို့မရအောင်တားထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ ညီလေးကောင်းမြတ်မင်းမရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတဲ့
အတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှု့အတွက်လဲ ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ရအောင်ကျိုးစားလျှက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
နတ်ဆိုး Kyaw Moe Oo သည် September 22, 2011 က 6:59pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ယခုလိုမျိုးအဖျက်သမားများအလွယ်တကူဖျက်မရအောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်များစုပေါင်းအလှူငွေထည့်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတစ်ခုဝယ်ဖို့သင့်ပါတယ်
သဘောထားကိုသိချင်ပါတယ်။comment ရေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျာ ကြယ်စင် သည် September 22, 2011 က 6:18pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ....... ‹ Previous
K L S
Top News · Everything K L S commented on K L S's photoIMG0233A1 hour agoမူကြိုဆရာ posted blog postsမဟာသမယသုတ် (မြန်မာပြန်)“… ဓမ္မပဒဂုဏ်ရည် …”သာသနာမည်သူ ပြုသနည်6း more…2 hours agoThaung Tan postedablog postအဓိပတိ(၃)ပါးထားပြီး တရားအားထုတ်ပါကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆ၇ာတော်ဘုရားကြီးက ယောဂီများတရားအားထုတ်တဲ့အခါ အဓိပတိ(၃)ပါးထားပြီး…See More3 hours ago 0
Soe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'သောတာပန် ကာမဂုဏ်ခံစားမှုနှင့် ပုထုဇဉ်တို့ ခံစားမှုဟာ အတူတူပဲ မဟုတ်လား'4 hours agoSoe Gyi shared မြတ်သွင်ကို's blog post on Facebookပုဗ္ဗ မုဉ္စ အပရစေတနာ ဆိုတာ..4 hours agoSoe Gyi liked မြတ်သွင်ကို's blog post 'ပုဗ္ဗ မုဉ္စ အပရစေတနာ ဆိုတာ..'4 hours agoSoe Gyi liked thein wai's blog post 'လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ ?။'4 hours agoSoe Gyi shared dimplemit's blog post on Facebookတန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည် ....၃5 hours agoSoe Gyi liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည် ....၃'5 hours agoSoe Gyi shared dimplemit's blog post on Facebookတန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၂5 hours agoSoe Gyi liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၂'5 hours agoSoe Gyi shared dimplemit's blog post on Facebookတန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၁5 hours ago More... RSS